सोल्टीनी उर्फ रियाशाको सुन्दरता (फोटो फिचर) – Khabar Silo
मोडल तथा कलाकार रियाशा दाहालले कुनै चलचित्रमा अभिनय गरेकी छैनिन् । तर, उनको चर्चा कुनै नायिकाको भन्दा कम हुँदैन ।
कलेज नेपाल नामक युट्युब च्यानलबाट प्रसारण हुने लघु–चलचित्रका कारण रियाशा चर्चामा छिन् । ती लघु चलचित्रमा उनले पछिल्लो समय सोल्टीनीको भूमिका निभाउँदै आएकी छिन् । घुम्न रुचाउने रियाशा आफ्नो सुन्दरताका कारण पनि फ्यानको मन जितेकी छिन् ।
उनले कैयन् म्युजिक भिडियोमा समेत अभिनय गरेकी छिन् । अभिनयमा पनि उत्तिकै रुचि राख्ने रियाशालाई सामाजिक सञ्जालमा फलो गर्ने फ्यान पनि उत्तिकै छिन् ।
गाउँले र शहरीयामा फिट देखिने रियाशाले सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेका तस्वीरहरु शेयर गर्छिन् । हेरौँ उनको बोल्ड रुप:
फोटोग्राफर देखेर भागे अक्षय कुमार, भिडियो भयो भाइरल
मुम्बई – अक्षय कुमार आफ्ना को–स्टारसँग प्रायः उट्पट्याङ गरिरहन्छन् । यसपटक उनले पापाराजीलाई पनि छोडेनन् । सामाजिक सञ्जालमा अक्षय कुमारको एक भिडियो भाइरल भएको छ । भिडियोमा अक्षय कुमार पापाराजीलाई देखेर भागिरहेको देखिन्छन् । पापाराजीलाई देखेर किन भागे अक्षय कुमार? खासमा अक्षय कुमार फिल्मको शूटिङ गरेर फर्किएका थिए । उनलाई पापाराजीले तत्कालै घेरे । भिडियोमा […]
अजयसँग यस कारण विवाह गरेकी थिइन् काजोलले
बलिउड अभिनेत्री काजोल तथा अभिनेता अजय देवगन विवाह वन्धनमा बाँधिएको २१ वर्ष भइसकेको छ।काजोलले २५ वर्षको उमेरमा अजयसँग प्रेम विवाह गरेकी थिइन्। विवाह गर्दा काजोल आफ्नो करियर उच्चतम लयमा चलिरहेकी थिइन्। धेरै नायिकाहरू करियरको उच्च बिन्दु रहँदा विवाह गर्न डराउँछन् तर काजोलले भने आफूलाई यस मामिलामा फरक बनाइन्।यस्तोमा उनले किन विवाह गरिन्? यस बारेमा उनले […]
पूजा–आकाशको जमेको जोडी
कात्तिक ८ गतेबाट नायिका पूजा शर्मा र नायक आकाश श्रेष्ठ अभिनित चलचित्र ‘पोई पर्यो काले’ रिलिज हुँदैछ । यो चलचित्रमा पूजा र आकाशसँगै सौगात मल्ल र श्रृष्टी श्रेष्ठको केमेष्ट्री पनि देख्न सकिन्छ । पूजा र आकाश प्रेममा छन् भन्ने चर्चा चलचित्र बजारमा चल्न थालेको छ । तर, पूजा र आकाश यो कुरालाई स्विकार गर्न तयार […]
यी बलिउड नायिकाले खाए जीवनभर विवाह नगर्ने कसम